Ahmiyadda Tallaalka Xoolaha | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Dr. Cabdiraxmaan Max'ed Cabdiraxmaan — July 16, 2019
Tallaalku waa in neef caafimaad qaba lagu duro daawo laga diyaariyay xaddi yar oo ka mid ah noolayaasha cudurada keena, taas oo aan neefka wax khatar caafimaad ah aan u
Tallaal marka aynu ka hadlayno ma aha sida daawooyinka oo kale, daawooyinka inta badan waxa loogu talo galay in lagu kaydiyo laguna isticmaali karo heer-kulka deegaanka ee caadiga ah (24Ċ).
gaysan karin balse, kicinaysa hab-dhiska difaac ee neefka si uu uga gaashaanto markasta oo uu isla cudurkaas laga tallaalay jidhkiisa soo galo.
Dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha waxa looga baahan yahay in ay si fiican aqoon ugu yeeshaan tallaalada iyo hababka loo isticmaalo, loona siiyo xoolaha kala duwan.
Cudur kastaaba waxa uu leeyahay tallaal gaar u ah, mararka qaarkoodna cudur kaliya ayaa yeelan kara tallaalo kala duwan iyada oo loo eegayo noolaha cudurka keenay nooca uu yahay.
• Tallaalku waa qaabka ugu wanaagsan ee lagaga hor-tegi karo cudurada.
• Tallaal kastaaba waxa u ka hor-tag u yahay cudur gaar ah.
• Tallaalku waxa uu yareeyaa dhaqaalaha daawayneed ee kaaga bixi lahaa daawaynta neef jirran.
• Tallaalku waxa uu ku keeni karaa neefka ay yar tahay awooddiisa difaac xanuuno hor leh.
• Ha wada isticmaalin hal mar tallaal iyo daawayn, taasi waxa ay keeni kartaa in tallaalka jidhka neefka laga sifeeyo.
Isticmaal shiliishka loogu talo galay tallaalka, kaas oo lagu buuxiyay xaddiga tallaal ee xoolaha la siinayo. Ku ilaali tallaalka heer qabaw ah (2Ċ-8Ċ) tallaalku waa in uu yahay mid ku habboon cudurka, kaas oo ay xaqiijisay dhakhaatiir caafimaad. Tallaalada kuwa u baahan in la qaso, ku qas biyaha la socda oo kaliya.
Ahmiyadda uu Qaboojiyuhu u Leeyahay Tallaalka
Laakiin, marka aynu ka hadlayno tallaal, waxa aynu ilaalinaynaa waa noole cudur-dhaliye ah oo awoodiisa hoos loo dhigay, looguna talo galay in aanu dhiman ee sidaas lagu gaadhsiiyo jidha neefka, markaas qaboojiyuhu ahmiyad gaar ah ayaa uu u leeyahay tallaalka, la’aantiina tallaalku waxtar yeelan maayo.
Haddaba waxa muhiim ah in tallaalka lagu ilaaliyo qaboojiye heerkiisu yahay (2Ċ-8Ċ), wakhtiyada kaydinta, qaybinta iyo marka tallaalka lagu hawlan yahayba.
Tags: Ahmiyadda Tallaalka Xoolaha (Importance of Livestock Vaccination)
Next post Jaamacaddu Maka Dhib Badantahay Waxbarashadii Hore?
Previous post 7- Dhaqan Oo Aan U Wanaagsaneyn Bulshada Dhdaxdeeda: